Counselling လုပ်ဖို့လိုအပ်နေသူတွေအတွက် ဘယ်လို ကုထုံးတွေပေးသလဲ? - Counselling လုပ်ဖို့လိုအပ်နေသူတွေအတွက် ဘယ်လို ကုထုံးတွေပေးသလဲ?
Counselling လုပ်ဖို့လိုအပ်နေသူတွေအတွက် ဘယ်လို ကုထုံးတွေပေးသလဲ?
Counselling လုပ်ဖို့လိုအပ်နေသူတွေ အတွက်
တစ်ယောက်ချင်းကုထုံး (individual therapy)
သမီးရည်းစားကုထုံး/အိမ်ထောင်ဖက် ကုထုံး(couple therapy)
မိသားစုကုထုံး (family therapy) နဲ့
အုပ်စုကုထုံး (group therapy) စတဲ့၀န်ဆောင်မှု့များကို ပေးနေပါတယ် ။
တစ်ဦးချင်းကုထုံး Individual Therapyကတော့ ခံစားနေရတဲ့ ပြဿနာအပေါ် အခြေခံပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ခံစားချက်အပေါ်မှာ လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ ပညာရှင်နဲ့ လုံခြုံသော၊ ဂရုစိုက်သော၊ မပေါက်ကြားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆွေးနွေးပြီး ခံစားချက်တွေ၊ ယုံကြည်မှူတွေ၊ အပြုအမူတွေ ကိုစူးစမ်းရှာဖွေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကို လွှမ်းမိုးနေတဲ့ မေ့ပျောက်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့မှတ်ဉာဏ်များနှင့်အတူ ပြောင်းလဲချင်တဲ့ ဘဝအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုကူညီရှာဖွေပေးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုနားလည်အောင် နဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝနိးကျင်ရှိ လူများကိုလဲ ပိုမိုနားလည်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် လိုချင်သော ပြောင်းလဲမှုအပေါ် မူတည်ပြီးမိမိနှင့်သက်ဆိုင်သော ပန်းတိုင်သတ်မှတ်ကာ အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ချစ်သူရည်းစား၊ အိမ်ထောင်ဖက် ကုထုံး Couple Therapyမှာတော့ လူနှစ်ဦးအကြား လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေကိုအဓိကအာရုံစိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာ တစ်ဦးချင်းလက္ခဏာများ ဖြစ်ကြတဲ့အပြုအမူ၊ ခံစားချက်၊ ပဋိပက္ခများ အပြင် လူနှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲခြင်းများပါဝင်ပါတယ်။
မိသားစုကုထုံး Family Therapy ကတော့ မိသားစုဝင်တွေကြားမှာ လေးနက်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာအောင် ကူညီပေးတဲ့ကုထုံးဖြစ်ပါသည်။ မိသားစုဝင်တွေကြားထဲက အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်စွာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး၊ ပြဿနာဖြေရှင်း ပုံနည်းလမ်းတွေ၊ ဖြေရှင်းပြီးရလဒ်တွေ မှာ အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့လိုက်ကုထုံး Group Therapy မှာတော့ ကုသမှုခံယူသူတွေကို ပြဿနာတွေ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ၊ တူညီတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုအပေါ် အခြေခံပြီး တစ်ခြားသူတွေရဲ့ ဝေဖန်မှု့ကို ဘယ်လို ကူညီရမလဲ ဆိုတာတွေကို ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စုကုထုံးက တစ်ဦးချင်းစီကို ဆက်သွယ်ရေး ကျွမ်းကျင်မှုများ ၊လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုများ တိုးတက်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီကို အခြားသူပြောသည့် စကားသံများအား နားထောင်စေခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိမြင်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။